I-Unitatic Unit Iingcaciso kunye neengcebiso zootitshala
Ootitshala Uvavanyo kunye neemvavanyo
by UJanelle Cox
Inyunithi yezobugcisa yintlangano yekharityhulam malunga nomxholo oyintloko. Ngamanye amagama kukho uluhlu lwezifundo ezidibanisa izifundo kwikharityhulam, njengemathematika, ukufunda, iintlalo zentlalo, isayensi, ubugcisa beelwimi , njl. Njalo bonke badibanisa kumxholo oyintloko wunithi. Umsebenzi ngamnye kufuneka ube nenjongo ephambili kwingcamango ecacileyo. Iyunithi yesifundo ibanzi ngokubanzi kunokukhetha isihloko.
Zifaka uluhlu olubanzi njenge-Australia, izilwanyana, okanye isimiso selanga. Ootitshala abaninzi bakhetha i-unit unit eyahlukeneyo kwiklasi yabo nganye ngeveki, ngelixa abanye bacwangcisa iimixholo zabo zokufundisa ezimbini kwiiveki ezilisithoba.
Kutheni usebenzise iiNyunithi zeMathematika
Yandisa abafundi abanomdla
Inceda abafundi baqonde ukudibanisa
Ukwandisa amacebo okuhlola
Igcina abafundi ababandakanyekayo
Ugcina ixesha lootitshala kuba luquka zonke izifundo
Idonsa kwiinkcukacha ezivela kwihlabathi langempela kunye namava okuphila
Iimpawu eziphambili zeCandelo leMathematika
Kukho iinqununu ezibalulekileyo zesicwangciso sesifundo seyunithi. Landela ezi khokelo xa udala iyunithi yakho yokufundela.
Umxholo - Khetha umxholo weyunithi ngokusekelwe kumgangatho oqhelekileyo wemigangatho, izithakazelo zabafundi okanye amava omfundi.
Ibanga leNqanaba-Khetha ibakala elifanelekileyo kwibakala.
Iinjongo - Ukuchonga iinjongo ezithile onokuthanda ukuziqonda ngexesha leyunithi.
Izinto eziphathekayo - Qinisekisa izinto oza kuzisebenzisa kuyo yonke iyunithi.
Imisebenzi - Ukuphuhlisa imisebenzi oza kuyisebenzisa kwiyunithi yakho. Qinisekisa ukuba uhlanganisa imisebenzi kwikharityhulam.
Imibuzo yengxoxo - Yenza iindidi zeengxoxo zeengxoxo ukubanceda abafundi bacinge ngomxholo weyunithi.
Ukhetho lweeNcwadi - Khetha iincwadi ezahlukeneyo ezihambelana nemisebenzi kunye nomxholo oyintloko wunithi.
Uvavanyo - Vavanya inkqubela phambili yabafundi kwiyunithi. Ukulinganisa ukukhula kwabafundi ngokusebenzisa i-rubrics okanye ezinye iindlela zokuvavanya.
Iingcebiso zokudala ii-Units Thematic
Nazi ezinye izicwangciso ezintathu zokukunceda ukuba wenze iyunithi yezifundo eklasini lakho.
1. Khangela umxholo ochaphazelekayo
Izihloko zingacwangciswa malunga neencwadi, iimpawu zokulinganisela, abafundi bezakhono kufuneka baphuhlise, okanye nje kumdla wabafundi. Fumana umxholo oya kukhuthaza nokukhupha abafundi abanomdla. Iimpawu zihlala zide ngaphezu kweveki, ngoko kubalulekile ukufumana umxholo oya kubagcina abafundi.
2. Yenza imisebenzi emnandi
Imisebenzi oyikhethayo yintliziyo yeyunithi. Le mi sebenzi idinga ukuwela ikharityhulam kwaye igcine abafundi banomdla. Amaziko okufunda yindlela enhle yokuba abafundi bafumane amava xa befunda izakhono ezibalulekileyo.
Ukuphonononga abaFundi beFundo
Nangona ukufumana umxholo oyintloko, kunye nokudala imisebenzi ehamba phambili yekharityhulam kubalulekile, ngoko kuhlola oko abafundi abaye bakufunda. Uvavanyo olusekelwe kwipolfoliyo yindlela enhle yokubona abafundi baqhubela phambili kwixesha elide. Ngokomzekelo, iphothifoliyo yendawo yokuhlala ingadalwa ukuze ibhale inkqubela yabafundi eyenziwa kuyo yonke iyunithi yeendawo zokuhlala.
Uphando lwezeMpilo luCoca iSicwangciso seSifundo
Isicwangciso seSifundo seProjimesi sePrisimesi
Imisebenzi Yosuku lweMhlaba kunye neengcamango
Isicwangciso seSifundo sePost Acrostic
Ukuchaza iIdioms: Isicwangciso seSifundo seNqanaba eliQalayo
IsiCwangciso seSifundo soLwimi lwesiXhosa
Imisebenzi yokubonga kunye neziCwangciso
Ukuphela koNyaka weSikolo: ABC Countdown kwihlobo
Bingo Kuphela kwiKharityhulam
Iindlela ezichanekileyo zokuphuhlisa imisebenzi esebenzayo
Umgca wokubhala ubhala Isicwangciso seSifundo
Raptor Dinosaur Imifanekiso kunye neeprofayili
Inkcazo kunye neMimiselo yoBuchule boLwimi
MOORE - Igama lokugqibela igama kunye nemvelaphi
I-Closest to the Contest Pin
I-Visa H-2A ye-trabajar e-EU e-agricultura kunye neyomzekelo
Izinto ezenziwe kwiBhunga loLuntu kunye nento abayenzayo
Yintoni Eyona Eyininzi Element?
Urhulumente WeeNgxelo zeMerika
IiNkcazo eziqhelekileyo zeNgqungquthela
Imbali yeCandelo le-Seventh-Inning Stretch
Yintoni i-Personal Psychological Makeup for Ergonomics?
Kutheni i-Chemistry ibalulekile?
I-Alkaline Earth Metals: Iipropati zamaqela e-Element
Sebenzisa iiNgoma ezidumileyo ukufundisa imizekelo
I-Genitive Singular in the Latin Declensions
Ukulungisa izivakalisi eziqhubekileyo kunye neCommma Splices
I-Point yokuBilisa yokuTyhila (Definition (Chemistry)
UkuCatshulwa koNyaka omtsha kunye namazwi
Amaphuzu avelele kwiNtsebenzo yeeVeki
Yakha iprogram yakho yeBakala iBateboard
I-Chip Shot: Into Eyiyo, Indlela Yokuyidlala
Funda ukudweba ubuso beCattoon ngeZimo ezilula
I-Post Admissions yeYunivesithi